ဖူးနုသစ်: အိတ်ထဲ ရှိရှိသမျှ အောလိုက်ရရင်
အိတ်ထဲ ရှိရှိသမျှ အောလိုက်ရရင်
တခါတလေတော့လည်း ရှေ့ဖြစ်ဟောတဲ့ အကြောင်းတွေက အံ့သြဖို့ ကောင်းပါတယ်။ ၁၉၉၈ ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ ကန်နေတဲ့ အချိန်ကပါ။ ကွာတား ဖိုင်နယ် ကန်နေတဲ့ အချိန် ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဒီနှစ် ပြင်သစ် ဗိုလ်စွဲမှာလို့ လာပြောပါတယ်။ ပြင်သစ်ဆိုတာ လုံးဝ အစဥ်အလာ မရှိတဲ့ အသင်းမို့ ကျွန်တော်တို့က မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ သူ့ကို ဝိုင်းပြော ကြပါတယ်။ မင်းဘယ်သူ ပြောလဲ ဆိုတော့ သာမညတောင် အောက်က ----- ဆရာတော်က ပြောတာ။ သူ့ကို ကိုးကွယ်တဲ့ တစ်ရွာလုံး ပြင်သစ်ကိုပဲ ဖိလောင်း နေကြတယ်လို့ သူက ပြောတော့ ကျွန်တော်တို့က ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူးကွာ ဆိုပြီး သူ့စကားကို အလေးမထား ကြပါဘူး။ အဲဒီလိုနဲ့ ပြင်သစ် ဆီမီးဖိုင်နယ် တက်လာတော့ ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ချို့က ပြင်သစ်ကို ဝိုင်းပြီး အောကြ ပါတော့တယ်။ သူတို့တွေ အဲဒီနှစ်က ပြင်သစ် လုပ်ကျွေးလို့ ဖိုင်နယ်ပြီးတဲ့ အချိန်မှာ အတော် ထောသွားကြ ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲတွေထဲမှာ ၂၀၀၂ ခုနှစ် ပွဲကတော့ အမှတ်တရ အရှိဆုံးပါပဲ။ အဲဒီတုန်းက တစ်နေ့ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်လာတော့ အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ငါအလုပ်ကနေ ခွင့်တစ်လ ယူလာခဲ့တယ်ကွလို့ လှမ်းပြောပါတယ်။ နေ့တိုင်းနီးပါး အလုပ်လုပ်ပြီး ပိုက်ဆံကို ကုန်းရုန်း ရှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်းက ခွင့်အကြာကြီး ယူလာတယ် ပြောလို့ အံ့သြ သွားပါတယ်။ ဘာလုပ်မလို့လဲ လို့ ဝိုင်းမေးတော့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ ကြည့်မလို့ ခွင့်ယူလာတာ လို့ ပြောလို့ ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ဝိုင်းရယ်ကြပါတယ်။ အစကတော့ သူ ကျွန်တော်တို့ကို နောက်နေတယ် မှတ်တာပါ။ ဒါပေမယ့် နောက်တစ်နေ့က စပြီး သူ တစ်လလုံးလုံး အလုပ်မသွားတော့ဘဲ တီဗွီရှေ့မှာ လာသမျှ ဘောလုံးပွဲတိုင်းကို မလွတ်တမ်း ထိုင်ကြည့် ပါ​တော့တယ်။ အဲဒီလောက်ကို ဝါသနာ ကြီးတဲ့သူလည်း ကြုံဖူးပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့က အိမ်မှာ ယောက်ျားလေးတွေချည်း စုနေတာ ဆိုတော့ တစ်အိမ်လုံး ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ကြပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ဖို့ အတွက် ကေဘယ်လ် တီဗွီနဲ့ ဘောလုံးပွဲလိုင်း ချိတ်ထားပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် နီးစပ်ရာ သူငယ်ချင်းတွေလည်း အိမ်မှာလာပြီး ဘောလုံးပွဲ ကြည့်ကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲ မစခင်ညက ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက် အိမ်ရောက်လာပြီး ကောင်လေး မင်း ပိုက်ဆံ ၂၀ အလကား မလိုချင်ဘူးလားလို့ မေးပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မေးတော့ ပထမဆုံးနေ့ ပြင်သစ်နဲ့ ဆီနီဂေါကန်မှာကွ။ ပြင်သစ်ဘက်ကလောင်းလို့ နိုင်ရင် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းရမယ်။ အဲဒီတော့ ပြင်သစ်ကို ဒေါ်လာ ၁၀၀ လောင်းလိုက်၊ ၂၀ရဖို့တော့ သေချာတယ်လို့ သူကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဟာ ရှုံးသွားရင် ငုတ်တုတ်မေ့ဦးမယ်။ လောင်းချင်ရင် ခင်ဗျားဘာသာ ခင်ဗျားလောင်း ဆိုပြီး ပြောလိုက်တော့ ငါက မင်းတို့ကို အကောင်းနဲ့ အကြံပေးတာ နားမထောင်ချင်ရင်လည်း မင်းတို့ ထိုက်နဲ့ မင်းတို့ကံပဲ လို့ ပြောပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ နောက်တစ်နေ့ ပွဲစစချင်း ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ပြင်သစ်ကို ကမ္ဘာ့ဖလား အခုမှ စကန်ဖူးတဲ့ ဆီနီဂေါက ကောင်းကောင်း တီးထည့် လိုက်တော့ ပြင်သစ်ဘက်က ဒေါ်လာ ၁၀၀ သွားလောင်းတဲ့သူ တကယ်ပဲ ငုတ်တုတ်မေ့ သွားပါတော့တယ်။
အစကတော့ အားလုံးက ဘောလုံးပွဲကို ကြည့်ရုံကြည့်ကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ အတူနေတဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က ဇာတ်လမ်းစလာ ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲ ဆိုတာ ဒီအတိုင်း ကြည့်ရတာ ဖီးလ် မရှိဘူး။ နည်းနည်းလေး အလောင်းအစားပါမှ ကြည့်ကောင်းတာကွ ဆိုပြီး ဒေါ်လာ ၂၀ သွားလောင်းလိုက် ၃၀ သွားလောင်းလိုက် နဲ့ လုပ်လာပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ အစိုးရက ဖွင့်တဲ့ စင်ကာပူပူးလ် ဆိုတဲ့ ထီဆိုင်မှာ ဘောလုံးပွဲလည်း လောင်းလို့ ရပါတယ်။ သူက စလိုက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲ လောင်းတဲ့ ပိုးဟာ မကြာခင် တစ်အိမ်လုံးကို ကိုက်ပါတော့တယ်။ ဟိုလူက သွားလောင်း၊ ဒီလူက သွားလောင်းနဲ့ နောက်တော့ အိမ်မှာရှိတဲ့သူ အကုန်လုံး နီးပါး တပျော်တပါးကြီး ဘောလုံးပွဲ လောင်းကြပါတော့တယ်။
ဘောလုံးဆိုတာ အလုံးကြီးပါ။ ဘယ်သူနိုင်မယ် ဘယ်သူရှုံးမယ်လို့ အတိအကျ ပုံသေတွက်လို့ မရပါဘူး။ အမှတ်အရဆုံး ပွဲကတော့ အမေရိကန်ရဲ့ အုပ်စုပွဲစဥ် နောက်ဆုံးပွဲပါ။ အမေရိကန်က အုပ်စုကနေ တက်ဖို့ သေချာနေပါပြီ။ သူနဲ့ ကန်မယ့် ပိုလန် အသင်းနဲ့လည်း ခြေက အတော် ကွာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အိမ်မှာ ဘောလုံးပွဲလောင်းရင် အချီကြီး ဝုန်းတတ်တဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ အဲဒီနေ့က သူ ကျွန်တော်တို့နဲ့ အတူ ဘောလုံးပွဲ သွားလောင်းရင်း အမေရိကန် နိုင်မှာ အသေအချာပဲ ဆိုပြီး ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောင်း ပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲ လောင်းတဲ့ ဆိုင်က ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ အိမ်ရဲ့ အောက်မှာတင် ရှိပါတယ်။
အိမ်ြပန်လာပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ တတွေ စကားတပြောပြော လုပ်နေတာနဲ့ ဘောလုံးပွဲ စကန်တာတောင် မသိလိုက်ပါဘူး။ စကန်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက် နေမှ ဘောလုံးပွဲ စပြီကွ ဆိုပြီး တီဗွီကို ဖွင့်ကြည့်ကြပါတယ်။ တီဗွီကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းရဲ့ ပါးစပ်က ဆဲသံ ထွက်လာတော့တာပါပဲ။ ၁၀ မိနစ်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ပိုလန်က အမေရိကန်ကို ၂ ဂိုး သွင်းထား ပါပြီ။ ဒီလိုနဲ့ ရင်တမမနဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ ၃ ဂိုး ၁ဂိုးနဲ့ အမေရိကန် ရှုံးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းလည်း မျက်နှာကြီးကို ရှုံ့မဲ့နေတာပါပဲ။ ၂၀၀ လောက်တော့ ခါတိုင်းလည်း လောင်းနေတာပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ ဘာဖြစ်သေးလဲ လို့ ကျွန်တော်တို့က ဝိုင်းပြောတော့ မဟုတ်ဘူးကွ။ ခုနက ငါတို့ ပြန်လာပြီးမှ ငါစိတ်ထဲမှာ နိုင်မှာ အသေအချာပဲ ဆိုပြီး နောက်ထပ် ၅၀၀ သွားထပ်လောင်းလာတာ။ အခုတော့ ၇၀၀ ထိသွားပြီ ဆိုပြီး ပြန်ပြောပါတယ်။
နောက်တော့ စင်ကာပူ ပူးလ်နဲ့ အားမရကြတော့ ပါဘူး။ စင်ကာပူပူးလ်က ပေးတဲ့ကြေးက တခြားဒိုင်တွေနဲ့ ယှဥ်ရင် နိမ့်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီတုန်းက စင်ကာပူပူးလ်မှာ အခုလို ဘောလုံးပွဲကို Live လောင်းလို့ မရပါဘူး။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်တို့အားလုံး အင်္ဂလန်ဒိုင် ဝီလီယမ်ဟေး ဘက်ကို ပြောင်းကြပါတယ်။ အွန်လိုင်းကနေ လောင်းကြတာပါ။ ဝီလီယမ်ဟေးမှာ ပေးတဲ့ကြေးက စင်ကာပူပူးလ်က ပေးတဲ့ ကြေးထက် အများကြီး ပိုမြင့်ပါတယ်။ အဲဒါအပြင် ဘောလုံးကန်နေတဲ့ အချိန် မိနစ် ၈၀ အထိ လောင်းလို့ ရပါတယ်။ မိနစ်ကြာလာတာနဲ့ အမျှ ကြေးလျော့လာတာပဲ ရှိပါတယ်။ ဘယ်သူ အနီကတ် ထိမလဲ၊ ဘယ်သူ ပထမဆုံး ဂိုးစသွင်းမလဲ ဆိုတာမျိုးတွေ အထိ အမျိုး စုံနေအောင် လောင်းလို့ ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ရဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ်ဒ်နဲ့ ဝီလီယမ်ဟေးမှာ အကောင့်ဖွင့်ပြီး အားလုံး ဝိုင်းလောင်း ကြပါတော့တယ်။
ဘောလုံးပွဲ မစခင်မှာ ကွန်ပြူတာ ရှေ့မှာ အားလုံးဝိုင်းပြီး လောင်းကြပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲကန် နေတဲ့ အချိန်လည်း စိတ်ပါရင် ပါသလို လောင်းကြပါတယ်။ ပြီးမှ အားလုံး ပိုက်ဆံ စုရှင်း ကြပါတယ်။ အဲဒီနှစ်က ကံမကောင်းပါဘူး။ အဆုံးသတ်တော့ အားလုံး ထိကြပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့ ဗိုလ်လုပွဲ ဘရာဇီး နိုင်မယ် ဆိုပြီး လောင်းတာတောင် ဒီအတိုင်း မလောင်းဘဲ ဂိုးပေါင်းတွေ လောင်းလို့ ရှုံးကြပါတယ်။
ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲကြီး ပြီးတော့ တအိမ်လုံး ဘောလုံးမှန်တာနဲ့ အီဆိမ့် သွားကြပါတယ်။ အများဆုံး ရှုံးတဲ့သူက ဒေါ်လာ ၅ ထောင်နီးပါး ကနေ အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ ၃၀၀ လောက်ထိ ရှုံးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ နည်းနည်း ကံကောင်းသွားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်က လက်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်နေတဲ့ အချိန်နဲ့ ကြုံလို့ အချီကြီး မလောင်း ဖြစ်တာနဲ့ ဘောလုံးပွဲ ပြီးလို့ စာရင်းချုပ်တော့ ၅ ဒေါ်လာ တိတိတောင် မြတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ ဝီလီယမ်ဟေးမှာ အကောင့်ဖွင့် ထားတဲ့ ခရက်ဒစ်ကတ်ဒ်ကိုတော့ လကုန်တော့ ဘဏ်က ဝီလီယမ်ဟေးနဲ့ အရောင်းအဝယ် အားလုံးကို ပိတ်လိုက်လို့ နောက်လက စပြီး အွန်လိုင်းမှာ ဘောလုံးပွဲ လောင်းလို့ မရတော့ပါဘူး။
ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) က တစ်ပေးဖို့ Tagပေမယ့် ဘောလုံးပွဲနဲ့ အဆက်ပြတ်နေတာ အတော်ကြာပြီမို့ တစ်မပေးတော့ ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြန်သတိရတာတွေ ရေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ZT at 10:50 PM
အမ်ားၾကီးေလာင္းျပီး အမ်ားၾကီးစိတ္ဆင္းရဲရတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြရဲ႕ အျဖစ္အပ်က္ေတြပါ ထည့္ေရးတာ
ဖတ္လုိ႕ ေကာင္းတယ္ဗ်ာ၊ Tag ဂိမ္းကို ေရးေပးတာ
ကိုေဇာ္မ်ဳိးလြင္၊ ေယာနက္သန္၊ ညီမူရာ၊ ဖူးႏုသစ္ ၊(done)
အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္၊ sosegado၊ ေမာင္မ်ဳိး
အိမ္ကလူႀကီးဆီ ဒီပို႕စ္ အီးေမးလ္ပို႔လုိက္မယ္။
(ဘောလုံးဆိုတာ အလုံးကြီးပါ။ ဘယ်သူနိုင်မယ် ဘယ်သူရှုံးမယ်လို့ အတိအကျ ပုံသေတွက်လို့ မရပါဘူး။)
ေဘာလံုးကို ေလးေထာင့္ ေျပာင္းလိုက္ရင္ေကာ အတိအက် ေျပာလို႔ ရမလား။ (ကိုေပါ ပို႔စ္ တစ္ခုမွာ ဖတ္ခဲ့ရတာ)
နာမည္ေျပာင္းသြားမယ္လို႔ေတာ့ ခန္႔မွန္းႏိုင္တယ္။ ေဘာေထာင့္ (သို႔မဟုတ္) ေဘာေလးေထာင့္ :D
ေဘာအန္စာလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ မမစင္။
(မွတ္ခ်က္။ ပလံု @ ဘိုးေတာ္ဘုရားႏွင့္ ဘာမွ မဆိုင္ပါ)
ခုမွ ဖတ္လို႔ရတယ္... အဟက္...
ေဘာလံုးပြဲတိုင္း လက္ထဲပိုက္ဆံမရွိပါေစေနဲ႔... ခစ္ခစ္
Khin oom may
:) / rita
ေဘာလံုး. ေဘာ ေလးဒါင္႕.. ေဘာဝိုင:္. ေဘာကြင္း.. ေဘာအန္စာ ဘယ္ဟာမွ မေကာငး္ ေဘာလံုးဘဲေကာငး္သည္။
ဘာပဲေလာင္းေလာင္း ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သိပ္မၾကားဖူးဘူး။ တရာမွာ တေယာက္ေလာက္ပဲ။ ဒါေၾကာင္႔ ေလာင္းကစားကို တို႔ေတြ အယုံအၾကည္ မရွိဘူး။ ZT ေရးတာ သိပ္ေကာင္းတာပဲ။ ဟုတ္တယ္၊ တကယ္က ေဘာလုံးပြဲမွာကိုပဲ စိတ္လွဳပ္ရွားစရာေတြ အျပည္႔ပါၿပီးသားပဲေနာ္။ ေလာင္းေတာ႔ စိတ္ေမာရတာေပါ႔။